သင်၏ဆံပင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားအောင်ကူညီနိုင်သည့်ကုစားနည်း ၅ ခု - Afrikhepri Fondation
Vဆံပင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားစေနိုင်မည့်အိမ်သုံးကုထုံး ၅ ခုကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်
ကြက်သွန်နီဖျော်ရည်ကော်လာဂျင်တစ်သျှူးများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဆာလဖာရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတစ်ရှူးဖို့ကူညီ တွန်းထိုး Les ဆံပင်.
ကြက်သွန်ဖျော်ရည်နှင့်သင်၏ဦးရေပြား Massage ။
သို့ပြုလျှင်သင်၏လျှော်ခြင်း ဆံပင် ရေနှင့်တစ်ဦးအပျော့စားခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့။
သင့်ရဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ပြီးနောက်, သင့်ကိုဆေးကြောဖို့ဤရေကိုသုံးပါ ဆံပင်.
ထိုနေ့ရက်သည်အခြားရေနှင့်သင်၏ဆံပင်သုတ်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ နက်ဖြန်နေ့၌, သင်သည်သင်၏ခေါင်းလျှော်ရည်မှသန့်ရှင်းသောရေကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်အနံ့မခံမရပ်နိုင်လျှင်, သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူလက်မဆေးမတိုင်မီအနည်းဆုံးတစ်နာရီစောင့်ပါ။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ခေါင်းလျှော်ရည်မသန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဆံပင်သုတ်ခြင်း။
သင့်ရဲ့များ၏ကြီးထွားဖို့ပံ့ပိုးအပြင်သင်သိရ ဆံပင်, ကြက်သွန်နီသူတို့ကိုတောက်ပစေသည်။
2 - အာလူးဖျော်ရည်
အပြင် တွန်းထိုး vos ဆံပင်အာလူးဖျော်ရည်ကို Alopecia ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အာလူးဗီတာမင် A, B, C တို့သင့်၌ငွေရတတ်သော ဆံပင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဤဗီတာမင်ကင်းမဲ့လာသောအခါကျွတ်ဆတ်ခြောက်သွေ့ဖြစ်လာသည်။
တိုက်ရိုက်အပေါ်အာလူးဖျော်ရည်ကို Apply ဆံပင် အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သူတို့ကိုကြေးဇူးတငျသုံးလေးယောက်မှအာလူးကို ယူ. , ထို့နောက်သီးဖျော်ရည်ကိုညှစ်။ ကအနည်းဆုံးဆယ်ငါးမိနစ်များအတွက်သီးဖျော်ရည်နှင့်သင်၏ဦးရေပြား Massaging ။ ထိုအခါရေနှင့်သုတ်ခြင်း။ သင့်ရဲ့လျှင်သင်တစ်ဦးဆံပင်မျက်နှာဖုံးအဖြစ်အာလူးကိုသုံးနိုင်သည် ဆံပင် အလွန်ခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒီဖျော်ရည်ကိုမှပျားရည်နှင့်ကြက်ဥအနှစ် Add နှင့်ရောမွှေပါ။
သင့်ရဲ့ဦးရေပြားပေါ်မှာဤအရောအနှော Apply ။
ပျားရည်နှင့်ကြက်ဥအနှစ်များအတွက်အကျိုးရှိသောအရာ, အာလူးဖျော်ရည်အတွက်အစိုဓာတ်ကိုကောင်းတစ်ခုငွေပမာဏကို add ဆံပင် ခြောက်သွေ့တဲ့။ ဒီသဘာဝဆံပင်မျက်နှာဖုံးသင့်ရဲ့ကြီးထွားဖို့ကူညီပေးပါမည် ဆံပင် လျင်မြန်စွာ။
3 - ကြက်ဥ
က Les ဆံပင် အဓိကအားဖြင့်ပရိုတင်းထားရှိရေး။ လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း တွန်းထိုး vos ဆံပင် အကောင်းဆုံးကိုပရိုတိန်းသို့မဟုတ်ကြက်ဥအဖြူတစ်ဦးသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က, အရှင်, သင်၏ရန်အပိုပရိုတိန်းပေး ဆံပင်ဒါဟာသူတို့ကိုကြီးထွားကူညီပေးပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဒီအရောအနှောတွေနဲ့သင့်ရဲ့ဦးရေပြား massage ထို့နောက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြက်ဥမွှေပါ။ တစ်နာရီထိုသို့ချန်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်, သင့်ကိုဖုံးလွှမ်း ဆံပင် ရေချိုးခန်းဦးထုပ်။ သို့ပြုလျှင်သင်၏လျှော်ခြင်း ဆံပင် ရေနှင့်တစ်ဦးအပျော့စားခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့။
သင်တို့သည်လည်း ADDED ခိုင်ခံ့စေတော်နှင့်သင့်ဖို့ထွန်းလင်းနိုင်ပါတယ် ဆံပင် ကြက်ဥတစ်မျက်နှာဖုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဦးရေပြားပေါ်ဂရုတစိုက်ဒီမျက်နှာဖုံး Apply ။
သင့်ရဲ့အဖုံးဖုံး ဆံပင် ရေချိုးခန်းဦးထုပ်။
မိနစ်ခန့် 15 20 များအတွက်အပေါ်ချန်ထားပါ။
4 - ပန်းသီး cider ရှလကာရည်နှင့်သင်၏ဆံပင်ဆေး
cider ရှလကာရည်ကသူတို့ကိုပိုမြန်ကြီးထွားကူညီပေးသည်သောဆံပင် follicles လှုံ့ဆော်။ အဆိုပါ PH ကိုချိန်ခွင်လျှာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအပြင် ဆံပင်ဒါဟာအစကြီးထွားစေရန်အရှိန်မြှင်သောဦးရေပြား, ဆေးကြော ဆံပင်။ ဒါကြောင့်ပန်းသီး cider ရှလကာရည်ကိုသင့်အဘို့အတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းလြျှောအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် ဆံပင်။ သင်သည်သင်၏လျှော်ခြင်းအခါတိုင်း ဆံပင် တစ်ဦးခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့အတူ cider ရှလကာရည်နဲ့ရေအရောအနှောတွေနဲ့ထို့နောက်သုတ်ခြင်း။ ပင်သင်၏အ cider ရှလကာရည်အနံ့ရနံ့နှင့်အချက်ကိုအားဖြင့်ရန် ဆံပင်သင်သည်သင်၏အရောအနှောတို့အားဤသို့သောအလာဗင်ဒါရေနံကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအနည်းငယ်ကျဆင်းလာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Fenugreek ၏ကျဆုံးခြင်းဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုထားပြီး ဆံပင် နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့နှင့်ကမ္ဘာ့ဒေသအများအပြား၌တည်၏။ ဒီအမွှေးအကြိုင်ကြီးထွားမှုအတွက်လည်းသုံးနိုင်တယ် ဆံပင်.
24 နာရီရေထဲမှာ fenugreek မျိုးစပါးစုပ်ယူထားသည်။
ရေကိုသင့်ရဲ့စိမ်ပါစို့ ဆံပင် အနည်းဆုံးသုံးနာရီ။
သို့ပြုလျှင်သင်၏လျှော်ခြင်း ဆံပင် ပူနွေးသောရေနှင့်အတူ။ ဆေးကြောဖို့ရေပူကိုအသုံးနှင့်သင့်သုတ်ဘယ်တော့မှရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဆံပင်.
Fenugreek လည်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆံပင်မျက်နှာဖုံးစေရန်သုံးနိုငျ တွန်းထိုး ပိုမိုမြန်ဆန်။
ကောင်းစွာကပ်လျက်တစ်မုန့်စိမ်းသည်အထိအုန်းသီးနို့နှင့် fenugreek မျိုးစပါးရောမွှေပါ။
သင့်ရဲ့ဆံပင်ပေါ်နှင့်သင့်ဦးရေပြားပေါ်မှာ Apply ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကုစားအပြင်, သင်သည်သင်၏ massage သင့်တယ် ဆံပင် အာဟာရဆီနှင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အနည်းငယ်အုန်းသီးဆီ, သံလွင်ဆီသို့မဟုတ်ဗာဒံသီးရေနံပြီးရင်ညင်ညင်သာသာထိုအဆီတွေထဲကနှင့်အတူမြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်သင့်ရဲ့ဦးရေပြား massage, အပူ။
အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုအောင်မြင်ရန်ရန်, ရေနံသင့်ရဲ့ထိုးဖောက်ပါစေ ဆံပင် နေ့ချင်းညချင်း။ ဒီမဖြစ်နိုင်ပါရှိလျှင်, ရေပူထဲမှာသုတ်ပဝါစိမ်, အပိုရေညှစ်ပြီးရင်သင့်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ထားသောပုဝါခြုံ ဆံပင် တော၌ထားသော။ တစ်ဦးပျော့ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့အေးစက်နှင့်အရင်ဆေးထို့နောက်ခဏအပေါ်ချန်ထားပါ။
ပူပြင်းသုတ်ပဝါဆီကိုသင့်ရဲ့စေမည်ဖြစ်သောနက်ရှိုင်းသောဆံပင် follicles သို့သွားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ဆံပင် ကျန်းမာထူထပ်သောနှင့်ခိုင်ခံ့။
SOURCE မှ: http://www.santeplusmag.com/5-remedes-maison-pour-faire-pousser-vos-cheveux-rapidement/
ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုဆံပင်တု၊ ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဆံပင်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုကုသမှု ...
€2ကနေ 16,99 အသစ်
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 30, 2021 10:03 pm တွင် updated
သံလိုက်ရေ၏စွမ်းအား - ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးအတွက်သောက်ပါ
တိတ်ဆိတ်၏နှလုံးထဲသို့ဝင်ခြင်း - ဝိန်းဒိုင်ယာ (အသံ)
ရီ King - အသွင်ပြောင်းစာအုပ် (PDF)
မင်းသား - နီကိုးလပ်စမီချယ်လီယာ (အသံ)
Ramana Maharshi - ငါဘယ်သူလဲ (အသံ)